Nezvedu - Nanjing Zhitian Mechanical And Electrical Co, Ltd.
NANJING ZHITIAN iri nyanzvi mukugadzirwa kwekutsiva zvikamu zvemapatya sikuruu extruder. Saka kune ane anopfuura makore makumi maviri ruzivo. Kugadzira mabhokisi emabhokisi, mapuranga uye sikuruu mapatya sikuruu extruder Isu tinokupa iwe basa rekugadzirisa remabhokisi emagetsi uye emabharani.
Kambani yangu ine simba rakasimba rehunyanzvi, yakanakisa yekugadzirisa michina, yepamusoro yekugadzira tekinoroji, yakasimba sisitimu yekuongorora uye yakakwana mushure mekutengesa sevhisi, inorumbidzwa nevatengi. Sezvo zvigadzirwa zvekambani yangu zvave kushandiswa mukukura muLeistritz, Coperion, Berstorff, JSW, Toshiba, Jwell, Steer uye mamwe maronda anozivikanwa.
NANJING ZHITIAN yakavambwa muna 2006. Panguva iyoyo nzvimbo yemusangano yaive pamusoro pe1000m2, Vashandi vashanu chete, Izvo zvaive pamberi pebhizinesi rekunze, zvigadzirwa zvese zvakagadzirwa kumusika wepamba.
Muna 2014, nzvimbo yemusangano yakawedzerwa kusvika ku5000m2, Huwandu hwevashandi hwakawedzera kusvika makumi mashanu, Isu takamisa R & D timu uye Yekutengesa timu, yakavandudza bhizinesi repasirese.Pakati pegore rino, vatengi vazhinji nevazhinji vatisangana nesu, isu tinoramba tichibatsira uye nekutsigira vatengi vanowanda kuti vapinde muvhu-kuumbwa zvigadzirwa munda.
Muna 2017, Takawedzera mashandisirwo ekugadziriswa, akadai se4 CNC michina, 2 yakadzika gomba yekuchera muchina, 1 matatu-mativi detector uye zvichingodaro.Pakati pegore rino, vatengi uye vatengi vekare vanoramba vachidzokorora mirairo kwatiri.
Muna 2018, nzvimbo yemusangano yakawedzerwa kusvika 10000m2, Hofisi zvivakwa zviri 700m2, Huwandu hwevashandi hwakawedzera kusvika ku90.Zvakawedzerawo timu yekutengesa kuvanhu vatanhatu vane musangano vhiki rega rega, kuti vasangane nehurongwa hwekuwedzera huwandu uye kusimudzira nhanho yebasa kune wese mutengi. . Kugadzirira kunoshanda kweinotevera danho rekuvandudza.
Muna 2019 Chivabvu, isu takatora chikamu muCHINAPLAS Guangzhou Exhibition panguva makumi matatu neshanu nguva yekuita danho rekumira padanho repasi rose rehunyanzvi indasitiri yakanaka, Muchiratidziro ichi, STD & HTD Gearbox kutanga, saka vatengi vazhinji kubva kuChina nemusika wekunze vakatanga kuziva isu.
Zvese ZT zvinoramba zvichiteerera kune nhanho dzese dzeruzivo, isu tiri kutarisira kune forge kumberi pamwe newe!